विदेशी आकाशमा उड्ने एयर होस्टेज नेपाली ‘परी’हरुको कथा !! (भिडियो) – Khabar28media
विदेशी आकाशमा उड्ने एयर होस्टेज नेपाली ‘परी’हरुको कथा !! (भिडियो)
वसन्तपुरकी सुमीका बज्राचार्य टेलिभिजनमा समाचार पढ्थिन् । यसबाहेक उनले व्यापारिक वस्तुहरूको विज्ञापनमा मोडलिङ पनि गरिन् । यतिले पनि उनको चित्त बुझेन् । मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन् । रंगिन दुनियाँमा रमाइरहेकी उनलाई लाग्थ्यो– ‘रुचिका यिनै विषयलाई मैले मेरो जीवनको मार्ग बनाउनुपर्छ ।’ **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
सुमीकाको योजना समयलाई मञ्जुर भएन् । समयको आँधीले उनलाई कल्पनासम्म नगरेको पेशामा हुत्याइदिएको छ । सुमीका अहिले पाँचसय यात्रु बोक्ने एयर बसमा सुपरभाइजर एयर होस्टेज छन् । फर्स्ट क्लास र बिजनेस क्लासका यात्रुहरूको खातिरदारी गर्दै उनी संसारभर घुमिरहेकी हुन्छिन् । दिनैपिच्छे नयाँ-नयाँ मान्छेको संगत, नयाँ-नयाँ ठाउँको दृश्यावलोकन, पाँचतारे होटलको बसाइँ उनलाई यो पेशा उड्न परीभन्दा कम लागेको छैन् । ओमान एयरमा सुमीकाजस्तै एघार नेपाली परी कार्यरत छन् ।
उडान अवधिभर थोरै रोमाञ्चक र धेरै त्रासले थिचिरह्यो । कतै बिग्रिने पो हो कि भन्ने डरले उडानको अनुभव नै भएन् । पछि बानी पर्दै गएपछि भने उनीहरूले बल्ल संसार बुझ्न थाले । एकदिन युरोप त एकदिन अमेरिकाको घुमाइले उनीहरूमा अर्कै आनन्दले घर गर्न थाल्यो । नयाँ मान्छेसँगको भेटले आफूभित्र पनि नयाँ सोच आएको अनुभूति हुन थाल्यो । अझ नेपाल रुटमा उडान पर्दा नेपाली दाजुभाइहरूलाई ‘आफू पनि नेपाली हुँ’ भनेर परिचय दिँदा देखिने न्यानोपनले थप ऊर्जा दिने उनीहरूको भोगाइ छ ।
Previous Article बैंकका ऋणीहरुका लागि अत्यन्तै खुसीको खवर !! सबैले सक्दो सेयर गरौ
Next Article जुम्लाका दिपेशलाई फेसबुकले दियो यस्तो कामका लागि ६० हजार पुरस्कार, तपाईं पनि जित्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस कसरी ?